Xigtada Xuska ku jirta: dhambaal dhaxal Gala oo madaxwayne Mustafe kusocda. | ogaden24
Xigtada Xuska ku jirta: dhambaal dhaxal Gala oo madaxwayne Mustafe kusocda.
Dhawaan markay Madaxa isla galeen Madaxwayne Mustafe Cumar iyo Maamulkiisa oo dhinac ah iyo Gudomiye Axmed Shide iyo Xulafo danley ah oo dhinaca kale ah, shacabka caadiga ah ee DDS, indheer_garadka bulshada, iyo ururada Siyaasiga ah ee kala duwan waxay si cad oo Gabasho la’aan ah ugu Hiiliyeen Mustafe iyo Maamulka hadda ka jira Deegaanka.
Taageeradaasi waxay Fajac ku noqotay Dhinacii kale iyo waliba Kuway Garabka ka haysteen, waxayna badashay Dhamaan Dheeshii Siyaasadeed ee socotay, waxaana Fashil ku dhamaaday isku daygii la rabay in Jidkii Qodxaha badnaa Bulshada dib loogu celiyo.
Hadaba, maadaama Markan Maamulkii Badbaaday, Bulshadiina u riyaaqday Natiijada timid, Waxaan jeclaystay in aan sheego Dhawr Dhaliilood oo markaan xog aruurin Sameeyay Walaac badan laga muujiyay:
1- Guusha Gooni looma laha:
Birmadkii la galay waa loo dhanaa, cid ka hadhay majirin, xataa kuway Mustafe xurguftu ka dhaxaysay waa sharaf dirireen. Qoys kaliya ama Qabiil Waxba kaligii ma Qabteen, Hadii la aamino in cid gooni ahi nidaamka jira Badbaadisay waa Balo iyo Baas iyo Bariiqasho xun. Halkaa Hala iskajiro.
2- Xigtada Xuska ku jirta: Waxaa jirta Xan badan iyo Xamxam aad usoo badanaysa oo ku saabsan in dad Xigto la ah madaxwaynaha ay kujiraan ( sheen ) iyo qaab u Eg Shiihalaqayntii Maamulkii hore ku caanka ahaa, waxaa si adag looga cabanaa dad aan Xilal Muuqda Haynin oo Hadana awood iyo ku amartaaglayn ka wada madaxtooyada DDS.
Halkaa Hala Iskajiro.
Doodu waxay leedahay halkaa qof aan xil rasmi ah ka haynin sababta uu dadka uga xigsan maxay tahay? Hadii jawaab Habaysan la waayo waxaa durba Maanka iyo Maskaxda ku dhagi aragti ah meesha maba wada lihine maxaan ka difaacanaa!. Halkaa Hala iska jiro.
3- Maamulka suuban iyo Musuqa:
Hadal Haynta Maamul xumo baahsan iyo Musuq Murqo yeeshay aad ayay u badan tahay, Malaayiin iyo Maal aan xad lahayn oo la musuqay baa carabka lagu Hayaa, dadku adeeg bixin Hufan iyo Horumar bay doonayaan, bilihii malabka ( Honeymoon ) lasoo Dhaaf ee Hadda Dheef baa loo fadhiyaa, Af-macaan iyo jannaan soo wadaa socon maysee isbadal deg deg ah iyo Baahida Bulshada oo laga jawaabo ayaa loo fadhiyaa.
Hantida Dawlada dadkoo dhan baa leh, Hadaan si wanaagsan looga wada faaiidaysanin is-nac iyo iscolaadin baa xigta, ileen qofkasta Hantidiisii buu u arkaa Xoolaha Dawladee, Qandaraasyada tusaale ahaan. Halkaa Hala iska Jiro.
4- Xizbiyada kale iyo Midnimada:
Markay shaqaaqadu dhacday Dhammaan ururadii mucaaradka ahaa si sharaf leh bay u garab istaageen Maamulka jira, midnimadii baa xoogaystay, waxaa la dareemay “Ummadnimo”. ONLF, SRAJ, Dulmi_Diid iyo qaar kaloo badan, waa tusaale Wanaagsan oo markan lagu diirsaday, waa fursad Xoogeenna lagu muujin karo marar kale, laakiin Xizbiga aad ku tiirsan tahay Mustafow ma aaminsano Wadajir iyo kala aragti duwanaansho, saa caqiidadiisa siyaasadeed baa ku dhisan ( Kalinimo), Waa suurto gal in Midnimadaas la wiiqo oo waliba isla xizbigaan uuni dadka kala geeyo, ileen Xilkii iyo Xoolihii aan lahayn kaligii baa ku amar taagleeyee. Halkaa hala iskajiro.
5- Dhalinyarada iyo Shaqo la,aanta:
Xoogga laga Haybaysto ee midnimadeena maanta Muruqa u ah waa dhalinyarada, ayagaa Nabada iyo Colaadaba Cudud u ah Deegaanka, Haday rajo beelaan Bulshadoo dhan baa Rajo beel Noqon, Waxbay barteen, Tayo iyo Tiraba waa leeyihiin, Hadaan Shaqo Abuur iyo Meherad loo samaynin waa Fulkaano Qarax wayn, dad badan ma ku baraarugsana arintaas, laakiin Anigu isbadalka bilowgiisiina waan codsaday arintaa.
Xafiisyada Dawlada waxaa dhooban Dhalinyaro aqoon leh oo fursad la’aan ah, nin jeclaysi iyo yaad taqaanaa ayay talaabo la dhaqaajin layihiin.
Hadalka oo kooban dhalinyarada oo qanacsan waxay ka dhigan tahay bulshadeena oo Gaashaan iyo Geysh ilaaliya leh.
Gabagabo: Madaxwayne Mustafow doorkan Hiiladii aad Heshay in aad Markale Heli Hubaal ma aha, Hadii aan Cabashooyinka jira Xal waara loo Helin, Dalkana loo sinaanin, Dadku ayagaa Dawladooda ilaashane Dantooda uun u ilaali.
Bye: Abdirahim M. Budul